I-Fumigator kumabhethri: iyini le divayisi futhi isebenza kanjani?
Ikhaya nomndeni, Izesekeli
Ngesikhathi esinjalo sonyaka njengehlobo kunezinzuzo eziningi ezingenakuphikwa. Enye yazo kusihlwa okufudumele, okujabulisayo ukuchitha ndawonye nabangani bakho ku-gazebo noma ebhentshini. Ukube kwakungekho okwenzela umuthi omiyane, isikhathi esinjalo esivundile singaba idyll yangempela ... Lezi zinambuzane ezinonya ezingaphazamisa kalula ukuhamba ehlathini noma epikinikini olwandle. Kodwa-ke, labo abathwala i-fumigator kumabhethri "Umgibeli", futhi futhi akukho lutho lokukhathazeka ngalo. Ngesizo salesi sakhiwo esiwusizo, ungenza amaholidi akho ajabule kakhulu.
Udinga ukuvikelwa emantwaneni? Sebenzisa i-fumigator!
Izinsimbi eziningi zisebenzisa amabhethri manje. Ekugcineni, abakhiqizi baqagela ukuwahlomisa nge-fumigator. Igama le divayisi livela egameni lesiLatini elithi fumigare, elisho ukuthi "ukubhema", "fumigated". I-fumigator kumabhethri ibhubhisa izinambuzane eziyingozi ngemfucumfucu eyingozi noma amaphuphu anobuthi. Idivaysi yokumisa isebenza uma ixhunywe emgodini wamandla futhi ikwazi ukuvikela kuphela ikamelo lapho lixhunyiwe khona. I-fumigator yeselula emabhethri isebenza ngesimiso esifanayo: ipuleti ekhethekile ibeke kuwo, lapho, uma ishisa, inika abantu abangenalutho, kodwa ibulawe izinambuzane, imibhangqwana. Amanani wale divayisi ayenokubusa ngentando yeningi ($ 10-15), futhi irekhodi elilodwa lingase likwazi ukusebenza ngenyanga.
Iphephile kangakanani futhi isebenzayo i-fumigator yebhethri?
Ipuleti, ebeka ngaphakathi kwedivaysi ephathekayo, iqukethe ubuthi be-paurteral neuromuscular ngesisekelo se-permethrin, allethrin noma i-pyrethrin. Zonke lezi zinhlanganisela zifana nezakhi zomzimba zemvelo ye-pyrethrum, equkethe i-chamomile yaseCaucasia. Ngokwemvelo, izinto ezinobuthi epulazini ziphansi (ngaphansi kwezingu-1%), futhi ukusetshenziswa kwe-electrosprayers kuvunyelwe nguMnyango WezeMpilo. Kodwa nokho kufanele kuqaphele ukuthi i-fumigator emabhethri kwabanye abantu ingabangela ukusabela okweqile, futhi uma umuntu ezwele kakhulu emiphumeleni ye-pyrethroids, isikhathi eside sokusebenza kwedivayisi kungaholela ekubukeni kwesifuba. Ezilwaneni ezifuywayo, le nto ingabangela ukuhlukumezeka, ukungahambi kahle nokuxubha kwamalungu. Konke lokhu kuholela ekucabangeni ukuthi akufanele usebenzise kabi idivayisi. Abakhiqiza bayeluleka emakamelweni avaliwe ukusebenzisa lelo divayisi ngokungabi ngaphezu kwamahora amathathu kulandelana, futhi endaweni evulekile - angabi ngaphezu kwamahora angu-8-10. Ngokuqondene nokusebenza komsebenzi, i-fumigator evela kumangqamu kumabhethri inempumelelo nakakhulu kunama-repellents, futhi umphumela womsebenzi awubonakali ngokushesha, kodwa ku-5-10 imizuzu, kodwa isikhathi eside kunomphumela we-sprays noma lotions efanayo. Ingqikithi yendawo ephephile ingaba ngamamitha amahlanu kuya kwangu-15. Ngesikhathi esifanayo, ungakhohlwa ukuthi esimweni esiphezulu sezulu umphumela uzoba mncane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi we-fumigator uhlobene ngokuqondile nekhwalithi yamapuleti aguquguqukayo. Muva nje, ama-fake aseqalile ukuvela njalo, ngakho-ke kuphakanyiswa ukuthenga amadivayisi anjalo ezindaweni ezinokwethenjelwa, ezisekelwe isikhathi eside.
Faka i-swing yengane ezweni
Izincomo zokukhetha ichibi lokubhukuda
Kuyini ukushisa-phansi noma iholofayber? Yikuphi ukugcwalisa okungcono kwebhokisi lebusika?
Indlela yokufaka isicelo isisekelo kanje ngobuso bakho? Ubuqili Masters
Ngesakhiwo Namandla zokucindezeleka ozithandayo
Ihhotela Art Boutique Hotel 3 * (Vietnam, Nha Trang): ukubuyekezwa, Uhlolojikelele kanye nencazelo
Chainsaw "Union": ukubuyekezwa, Ukucaciswa, imiyalelo yokusebenzisa
Izinhlobonhlobo Sakudala amagonandoda: izithombe, incazelo, ukubuyekezwa
"Enterosgel" izinsana: izinkomba ukusetshenziswa
Indlela yokuthunga isikhwama se-jeans endala noma impilo yesibili
Ukuhlanzwa kwamazinyo okuzinyo kwenziwa kanjani futhi kungani kuyadingeka?